Siyabonga Ngokuqashelwa Namuhla, Indy! | Martech Zone
Siyabonga Ngokuqashelwa Namuhla, Indy!
NgoLwesine, Juni 11, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
NgoFebhuwari ngadonsa ubusuku bonke nangezimpelasonto ngenkathi ngivolontiya i- Ikomidi leSuperbowl lika-2012. UPat Coyle ungishayele ucingo ngesikhathi lusanda phezulu futhi nginamandla okuba semkhunjini futhi nginikeze ukuholwa okuthile (nentuthuko impela) ukuhlanganisa umkhankaso wezenhlalo nowokusesha lokho kungathola igama le-Indianapolis kuyo yonke iwebhu njengedolobha elizolikhetha.
Isayithi liphinde lahlanganisa okuqukethwe okucwengekileyo kuyo yonke iwebhu nakuzindawo zemithombo yezindaba zasendaweni ukugcina izakhamizi zase-Indy zisesikhathini ngenqubekela phambili yephrojekthi. Kwakuwumsebenzi ozuzisa ngendlela emangalisayo neqembu elihle eliholwa nguMark Miles. Wonke umuntu wahlukanisa futhi wanqoba… futhi sakwenza lokho! UMark ungomunye wabaholi - uyazi ukuthi angalihlanganisa kanjani iqembu, asuse izithiyo empumelelweni, futhi anike abantu bakhe amandla okwenza umsebenzi.
Namuhla, ngithole uqwembe oluhle oluvela kuMichael Karnuta, Iphini Likamongameli Wezokuthuthukiswa Kwamabhizinisi we I-Indiana Sports Corporation ngosizo engilunikile. I-plaque empeleni inengcezu eyiqiniso ye-RCA Dome kuyo, ipholile kakhulu!
Uma ungajwayelene ne-Indiana Sports Corporation futhi uhlala lapha endaweni, udinga ujoyine mathupha inhlangano nokuthola kwakho inkampani yakho ukuthola ubulungu, nayo! Sinethani lemicimbi eza e-Indianapolis eminyakeni eyishumi ezayo futhi uma ufuna ukubuyisela esifundeni futhi uthole ukuqashelwa okuhle - leli iqembu okufanele lijoyine!
I-Indiana Sports Corporation
Ithimba lobulungu le-Indiana Sports Corporation lisebenza njengesikhuthazo ekuheheni imicimbi emikhulu e-Indiana nasekunikezeni ngamathuba ahlukile entsheni yethu. Umnikelo wakho odonswa ngentela nawo uza nezinzuzo eziningi. Uma unanoma yimiphi imibuzo ngobulungu be-ISC, sicela uxhumane noMike Pruzin kubulungu@indianasportscorp.com noma (317) 237-5020.
Sibonga ngokukhethekile kuMichael ngokuthatha isikhathi sakhe namhlanje ukungibona. UMike wayenomusa omkhulu lapho ezwakalisa ukubonga kwakhe kimi ngomzamo, ukubulawa kanye nobuholi engiqhubeka ukububeka ekuqhakambiseni isifunda. Uphose esikhwameni samapulangwe okhuni ngenhloso yokweba ukukhombisa umthelela engibe nawo ukubasa umlilo ngaphansi kwephrojekthi. Ngiyaziqhenya ngokubamba kwami ​​iqhaza ekutholeni iSuperbowl (impela… kungenzeka ukuthi uPeyton no-Irsay nabo basizile) futhi ngiyabonga ngobungane bami obuqhubekayo noPat Coyle ukuvula la mathuba.
Ngibheke phambili ekulandeleni uMichael nabanye abaholi abasebenza kanzima ukuletha imicimbi emikhulu yezemidlalo esifundeni! Kini bantu abangaphandle kwe-Indianapolis - angiqondile ukudlula phezu kwedolobha lethu, kepha yidolobha elikhulu elinesizinda sebhizinisi esixhumeke ngendlela emangalisayo. Kukuphi lapho ongavolontiya khona futhi ungene ukuze usize ukuthola iSuperbowl?
Tags: 2012 isitsha esikhuluindianapolismaka amamayelai-rca domeimithombo yezokuxhumana ye-super bowlsuperbowl
Sebenzisa u- $ 299 bese uthumela isiza sakho kuYahoo?
UJun 14, 2009 ngo-9: 30 AM
Siyakuhalalisela. Lo mphakathi unenhlanhla yokuba nawe!